ဆှီဒငျဘဏ်စနစ် | Apg29
စာအုပ်သာလျှင်ငွေက cashless ပူးပေါင်းကြံစည်မှု
အဆိုပါ Riksbank ငွေသားများလျှော့ချအသုံးပြုမှုသည်သူ၏စွပ်စွဲချက် "ကြားနေရေး" ရှိနေသော်လည်းလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ Riksbank နှစ်စဉ် "ဒီဆွီဒင်ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်" ဟုခေါ်နေတဲ့အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေသည်။ ဒါဟာငွေပေးချေမှုအပေါ်စာရင်းဇယားများပါဝင်သည်။ ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ယင်းကဲ့သို့ဆွီဒင်ရှိပါတယ်မည်မျှ ATM စက်များနှင့်အကြွေးဝယ်ကတ်အသုံးပြုစက်များကိုအဖြစ်စာရင်းအင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်ဖတ်နိုင်ကြပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များကြီးလေးခုကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်။ Nordea, Swedbank, SEB နှင့် Handelsbanken ။ ဘဏ်များသာဘဏ်ကိုသူ့ဟာသူအတွင်းအသုံးပြုသောကြောင်းသီးခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံရှိသည်။ ဘဏ်များတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေတချို့အတိုင်းအတာအထိလည်းဖြစ်ကြပြီးအန္တရာယ်များတဲ့ဒိုမီနို effect ကိုဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းများဖွဲ့စည်းရသောတစ်ဦးချင်းစီကတခြား securities ကိုင်ဆောင်။ ထိုသို့သောအာမခံကုမ္ပဏီများနှင့်ဘဏ်များ၏အခြေအနေကိုဝယ်ယူကြီးမားသောလက်လီချည်နှောင်ကဲ့သို့သောအခြားသရုပ်ဆောင်တွေများအတွက်ဘုံဖြစ်လာသည်။ နိုင်ငံတကာမှာ, ဆွီဒင်ဘေဆယ် III ကိုကိုခေါ်ဘဏ်လုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်စံဘဏ်တွေ '' ဘဏ္ဍာရေးတည်ငြိမ်မှုလိုအပ်သည်။ ဒီ core ကိုစနစ်ကပြင်ပမှာအကြီးအကျယ် liabilities ပါဝင်ပါသည်ရာသည် Tier ငါနှင့်အဆင့် II ကိုခေါ်တော်မူနှစ်ခု "အလွှာ" ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအတော်လေးယခုလိုဖြစ်ပါသည်, သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်ပိုဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဗတ္တိဇံချင်ပေလိမ့်မည်သောသူတို့အဘို့စည်းကမ်းချက်များကိုသိရန်ကောင်းပါတယ်။
အဆိုပါ Riksbank နှင့်အထွေထွေကောင်စီအမြဲတမ်းပါလီမန်မှအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Riksbank လည်းတစ်ခုအလုပ်အမှုဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ 1600 ခုနှစ်, ဆွီဒင်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ Riksbank ဟာဒေဝါလီပြည်နယ်ကဝယ်ယူပြီးနောက်ဘဏ်အားဖြင့်ကြုံတွေ့။ Riksbank ကားလ် XIs နန်းစံရှေ့တော်၌ထိုဖြုန်းတီးရင်ခွင်ပိုက်စဉ်အတွင်းပုံသဏ္ဍာန်ကိုယူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်မှာခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် Riksbank တာဝန်ရှိသည်ဘဏ်တွေငွေသုံးပြီးထံမှတတ်နိုင်သမျှတားဆီးနေဖြင့်တစ်ခုလုံးကိုဆွီဒင်လူဦးရေရဲ့အုပ်ထိန်းသူသရုပ်ဆောင်နေသည်။
အဆိုပါ Riksbank ထို့နောက်ငွေစက္ကူတွေထုတ်ပေးအပေါ်တစ်ဦးလက်ဝါးကြီးအုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်း 90 ခုနှစ်တွင်ငွေဖောင်းပွမှုထက်လဲလှယ်မှုနှုန်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မူဝါဒစတင်ခဲ့သည်။ ပိုက်ဆံ Riksbank သာ Riksbank မှာ rinns စီမံခန့်ခွဲ။ အတိုးနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့ Riksbank ရဲ့အဓိက tool ကိုအခြားဘဏ်များမျှော်လင့်အတိုင်းလိုက်နာပါလိမ့်မယ်ဒါမှ repo မှုနှုန်းကိုပြောင်းလဲပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ repo နှုန်းမှာအနုတ်ဒါကြောင့်ထူးဆန်းတဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ပျက်နှင့်ဘဏ်များအောက်ပါတဲ့အခါမှာဒိန်းမတ်ငွေသားတစ်ခုတိုးလာဝယ်လိုအားပေါ်ထွန်းအိမ်နီးချင်းကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ Riksbank ငွေသားများလျှော့ချအသုံးပြုမှုသည်သူ၏စွပ်စွဲချက် "ကြားနေရေး" ရှိနေသော်လည်းလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ Riksbank နှစ်စဉ် "ဒီဆွီဒင်ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်" ဟုခေါ်နေတဲ့အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေသည်။ ဒါဟာငွေပေးချေမှုအပေါ်စာရင်းဇယားများပါဝင်သည်။ ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ယင်းကဲ့သို့ဆွီဒင်ရှိပါတယ်မည်မျှ ATM စက်များနှင့်အကြွေးဝယ်ကတ်အသုံးပြုစက်များကိုအဖြစ်စာရင်းအင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်ဖတ်နိုင်ကြပါတယ်။ အဆိုပါဘဏ်မှလည်းခေါ်ငွေပေးချေမှုအပေါ်အခြားအစီရင်ခံစာထုတ်ဝေထားသည် "ဟုဆွီဒင်လက်လီငွေပေးချေမှုဈေးကွက်။ "
ဆှီဒငျဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်၏တစ်ဦးကကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု RIX ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါ Riksbank ရဲ့ RIX sys-tem ကြီးမားတဲ့ငွေပေးချေမှုအားလုံးအဓိကဘဏ်များအကြားကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ ငွေပေးချေမှုအများစုဟာအမျိုးအစားများကိုကငွေသား, ကဒ်, ခရက်ဒစ်, လုံခြုံရေးသို့မဟုတ်ငွေကြေးရှိမရှိ RIX မှတဆင့်သွားပါ။ အနည်းငယ်သောယခုလိုအများအားဖြင့် RIX "နိဂုံးပိုငျးစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်အကြွေးတွေနဲ့ရရန်အားဖြင့်ငွေပေးချေမှုကိုငြိမ်း" ဟုဆိုသည်လိမ့်မည်။ ဒါဟာဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေသားနှင့်အတူ RIX သဘောတူညီချက်မှဆနျ့ကငျြနည်းနည်း-တိကျမ်းစာ၌လာသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ ငွေပေးချေမှု၏အရေးပါသောအမျိုးအစား, ပင်စင်လစာ RIX မှတဆင့် Riksbank မှာအကြွေးအကောင့်ထဲမှာငွေနေကြသည်။
စနစ်က - ဆွီဒင်ဘဏ်များ၏တစ်ဦးကလက်တဆုပ်စာနှင့်အချို့သောနိုင်ငံခြား RIX အတွက်အကောင့်ရှိသည်။ နိုင်ငံခြားသိသာ Citibank နှင့်မော်ဂန် Chase များထဲတွင်။ တချို့ကဘဏ်များ jak ဘဏ်နှင့် Ecobank RIX ချိတ်ဆက်မဟုတ်ပါဘူး။ RIX အကောင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းဘဏ်များနေဆဲ proxy ကစနစ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
အဆိုပါမင်းသမီး Mint,, နဂါး Credit Card ကိုနှင့် Black Knight ၏သခင်
Mint, အမည်ရှိမင်းသမီးတစ်ချိန်ကရှိခဲ့သည်။ သူမသည်ဒင်္ဂါးပြားများနှင့်ငွေးစက္ကူ၏ပုံစံအတွက်ငွေသား၏ကြီးမားသောဘဏ္ဍာကိုဖြစ်ကြည့်ရှုသောအရာကိုပေါ်မှာထိုင်လေ၏။ သို့သော်ပွဲလှည့်စားနေကြသည်။ ကြီးပုံ၏, ကငွေသားအနည်းငယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုတသမတ်တည်း၏ပုံစံကိုသာမျက်နှာပြင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတောက်ပမျက်နှာပြင်စဉ်အတွင်းအကြွေးကဒ်များကိုသန်းပေါင်းများစွာ conned ။ ပုံအလယ်၌ထိုသို့မကောင်းသောအမှော်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးရုံကြီးမားပျက်ပြယ်ခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံခေါ်ပျက်ပြယ်အခွန်ပုံကတကယ်ဖြစ်ခဲ့သည်ထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ကြည့်ရှုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ပုံရဲ့အစွန်းန်းကျင်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်သေးငယ်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးမှင်စာကြပါတယ်။ အဖြစ်မကြာမီတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအကြွေစေ့လုဖို့ကြိုးစားသကဲ့သို့သူတို့ hissed နှင့်သူ၏ထွန်သွားများပြသခဲ့သည်။ ဒါဟာပိုက်ဆံလုဖို့စွန့်သောသူကိုသာ bravest ဖြစ်ခဲ့သည်။
မကောင်းသောအနဂါးနှင့်သူ၏ခရက်ဒစ်ကဒ် cashless Black Knight အပေါငျးတို့သငွေသားကိုပယ်ရှားခြင်းနှင့်မင်းသမီးလေးကိုသတ်ချင်တယ်။ ထိုသို့သောလင်းတနှင့်မှားယွင်းသောအခွန်ကုန်းနိုင်ငံအများအပြားအတွက်ရှိခဲ့သည်။ ပြီးတာနဲ့အချိန်ပေါ်၌အခွန်တောင်ပို့နီးပါးသီးသန့်ငွေသားပါဝင်သည်။ ဒါပေမယ့်အပြီး SamUSAmien အနက်ရောင်မှော်၏အကူအညီဖြင့်ရေတိုသည်နဂါး, အကြွေးကတ်များနှင့်ကွာဟမှု created ကြီးတွေဝေးလံသောတိုင်းပြည်ထဲကနေမကောင်းသောအ wizards ကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့သည်သောအရာကိုဖြစ်လာခဲ့သည်။ အကြွေးဝယ်ကတ်များနှင့်ပျက်ပြယ်သူတို့နှင့်အတူဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြင့်အခွန်ထပ်ဖျက်ဆီး, အပေါငျးတို့သနိုင်ငံများအကြားပတ်ပတ်လည်လှည့်လည် Wizards ။ အဆိုးဆုံး wizards ၏ညီအစ်ကိုသုံးယောက် Mastro, Expresso နှင့် Dinero ခဲ့ကြသည်။
သူတို့ကမင်းသမီးလေး Mint, ကိုသတ်ခြင်းနှင့်ပုံကနေလုံးဝငွေဖယ်ရှားပစ်ရန်စားပွဲ-shaped ကတ်များနှင့်အစီအစဉ်များကိုလှည့်ပတ်ထိုင်အဖြစ်ကိုဘေးဥပဒ်ကိုနိုက်အချို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးကွပါစို့။ Riksbank အမည်ရှိနိုက်တဦး။ မိမိအတာဝန်ငွေဟာ stack ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာသော်လည်းပမာဏအတူတူအကြောင်းကိုအပေါ်စောင့်ရှောက်ကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။
သူအတော်လေးကောင်းစွာတိုင်းပြည် Finansien အတွက်လူသိများသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျသူ့ကိုအကြောင်းကိုပိုမိုဘာမှပြောပြရန်ရှိမရှိမသိရပါဘူး။
FSA အမည်ရှိနောက်ထပ် Knight ။ သူကလုံးဝအသံပြာအသံသည်အထိအဖြစ်မကြာမီတစ်နေရာရာမှာသူထွက်ရှိရရှိသွားတဲ့အတွက် oblong တိုင်းပြည် Finansien အတွက်စကားလုံးလုယက်မှုတီးတိုးအဖြစ်ဤမျှလောက်တစ်စုံတစ်ဦးအဖြစ်, ရက်ပေါင်းများစွာအဘို့, သူသည်လမ်းခရီး၌တူညီသောသတင်းစကားထွက် yells ။
キ0"ကျနော်တို့တဖြည်းဖြည်းငွေသားဂိုဏ်းဂဏကိုဖယ်ရှားရမယ်!"
နောက်ထပ် Knight ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအသင်းမှ။
キ 1 "လုယက်မှု! လုယက်မှု!" ဒီ Knight Yells ။
တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်နေရာရာမှာ Finansien အတွက်တစ်ခုတည်းအသေးစားငွေပိုက်ဆံခိုးယူအခါတိုင်းဒါဟာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
キ2"ကျနော်တို့ငွေထောက်ပံ့ကြေးကိုဖယ်ရှားလိုလျှင်, ခိုးယူဖို့ဘာမှမရှိဘူး!", သူစိတ်ချလက်ချ exclaims ။
(ဘဏ္ဍာရေးကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်တွင်အေဂျင်စီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနှစ်ခုအခြားအေဂျင်စီများများ၏ပေါင်းစည်းရာမှ 1991 ခုနှစ်တွင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အဓိကတာဝန်အာမခံကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီတွေဟာစောင့်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ FSA လည်း "။ ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်အပေါ်စားသုံးသူများ၏အနေအထားကိုအားကောင်းလာစေရန်" ကိုတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်အရာအားလုံး cashless လုံးဝကြှနျုပျတို့ခေါငျးပျေါဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ။ )
နိုက်၏နောက်ထပ်စုံတွဲရောနှောအဆိုပါ cashless လူ့အဖွဲ့အစည်းလက်ကားဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနှင့်ဆွီဒင်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ် propsar ။ ယခင်သုတေသနဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်အဆုံးစွန်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အခုတော့ Knights ဒီ topsy-turvy ပုံပြင်ထဲမှာအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကရိုးရှင်းစွာအတူတကွလမ်းလျှောက်သူဟစျကျွောလေ၏နှင့်သူ၏အသက်အဘို့တောင်းပန်သော်လည်းသူသည်ဆင်းရဲသောသူမင်းသမီးလေး Mint, ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာသူတို့ရဲ့ဓားထိုး။ သူတို့တစ်နိုင်ငံလုံးကျော်နဂါးခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုရှငျဘုရငျသ groveling နှင့်တွားခဲ့ဘူးကတည်းက။ နဂါးသည်သူ၏မီးနှင့်အတူအပေါငျးတို့သဥပဒေကြမ်းများတက်ကိုမီးရှို့
အသက်ရှူ။ အဆိုပါ Knights ပုံကနေအပေါငျးတို့သဒင်္ဂါးပြားကိုချွတ်ကောက်ယူနှင့်မင်းသမီးလေးနှင့်အိုင်ရှိသူတို့စွန့်ပစ်။
သူတို့ဟာပြဿနာများမရှိဘဲနဂါးတစ်ခုတည်းကိုက်အတွက်မင်းသမီးလေးရဲ့အသေကောင်ကိုကိုက်စားခြင်းနိုင်ကြောင်းကောင်းစွာသိသည်။ သူမမတော်တဆခဲ့လျှင်မူကားအဘယျသို့မတော်တဆဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမကလုံခြုံရေးအဖြစ်အဝတ်အတွက်အနည်းငယ်ဒင်္ဂါးပြားချုပ်ခဲ့တစ်ချိန်ချိန်တစ်အကြွေစေ့သို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုမျိုတတ်၏။ နဂါးတကယ်တော့ဒင်္ဂါးပြားရန်အလွန်မတည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Knights အစားနဂါးမှသူမ၏စားစရာရိက္ခာကို ပေး. အိုင်ထဲမှာမင်းသမီးလေးအရေးပေါ်သိမ်းထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နဂါးယခုအကြွေးကဒ်များသူ၏ကြီးမားပုံပေါ်ခြောငျးဖြစ်ပါတယ်။ မည်သူမဆိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေပါလျှင်သူပမာဏနှင့်အလေးချိန်အပေါ်ဆို့နိုင်အောင်သူ့ကိုကြီးမားတဲ့မြင့်မားတဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့်အတူရိုးရိုးသားကောင်သူ pawing ။ ဇာတ်လမ်း၏အဆုံး။
Sverge အတွက်ငွေသားများဖယ်ရှားရေးနှင့်စပ်လျဉ်းထွက်စကားပြောများနှင့် cashless ခုခံတွန်းလှန်အားဖြင့်ငါတို့သည်ရေရှည်မှာအတွက်ပုံပြင်အဖြစ်မှန်ဖြစ်လာနှောင့်နှေးမှာအနည်းဆုံးပြီးတော့တားဆီးမနိုင်လျှင်။
အကြောင်းတစျထောငျပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများကြောင့်ဥပမာ, ငွေသားတစ်ဦးထက်ပိုစျေးကြီးတဲ့ကားကိုဝယ်သောသူတို့အဘို့ မှလွဲ. တစ်ဦးခြားနားချက်များစွာမကျမည်အကြောင်းဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။ သို့သော်လျှင် 500 နှင့် 200 -kronors -sedlarna နှစ်ဦးစလုံးဖယ်ရှားရေးအစစ်အမှန်ပြဿနာတွေကစတင်ခဲ့သည်။ အဝတ်အထည်နှင့်အစားအစာနေဆဲမျှမျှတတကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, ဒါပေမယ့်ကိုသာအမှန်တကယ်ဝယ်ယူ၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးတရာအပိုင်းပိုင်းနှင့်အတူ 25000 များအတွက် Scooter ဝယ်ယူလျှင်မူကားအရောင်းစာရေး 250 ငွေစက္ကူတွေရေတွက်သင့်ပါတယ်။ 200 ပါ့ - kronor ငွေစက္ကူတွေရှိမှဖြစ်ပျက်, သူနေဆဲဤမျှလောက်ပျော်ရွှင် 125 မှရေတွက်ဖို့ဖောက်သည်သူရေတွက်နေစဉ်တွင်သူ့အားပြောပြရန်ဖြစ်ပျက်သောအခါသူအာရုံစူးစိုက်မှုရှုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်သူငွေသားပမာဏကိုလက်မခံဖို့ငြင်းဆန်လိမ့်မည်။ အမျိုးမျိုးသောဂိုဏ်းဂဏအတွက်ရရှိနိုင်ငွေကအများဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းမူကား,
အဆိုပါအာဏာပိုင်များကငွေသားဖယ်ရှားရန်လုယက်မှုအပြစ်တင်ဖို့တိုင်းအခွင့်အလမ်းကိုယူပြီးအစားတစ်ဦးအပြုသဘောဆောင်တဲ့လမ်းအတွက်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနေကြသည်။ အများပြည်သူမနားထောငျ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအထောင်အသောင်းကိုအပိုင်းပိုင်းထင်တဲ့သူမှသာ 12 ရာခိုင်နှုန်းမလိုအပ်သောကြောင်း, ဥပမာ, တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က Jonkoping အတွက်အများကြီး-ထုတ်ပြန်ထားတဲ့လုယက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာရက်အနည်းငယ်ကဒီပြီးနောက်ဖယ်ရှားမည်ဖြစ်ကြောင်းတထောင်ကိုပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများပေးရန် FSA အဆိုပြုထားသာဖြစ်ခဲ့သည်။ အချိန်၌သငျထို့နောက်ကိုလည်းပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများငါးရာနှင့်တရာ tags များကိုဖယ်ရှားခဲ့ပေ။
တစ်ခုမှာငွေသားများနှင့်မော်တော်ယာဉ်များအကြားတစ်ဦးအပြိုင်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်ခိုးယူကုန်တင်ကားများနှင့်ကားများတားမြစ်မယ်လို့ဝေးရဖို့လျှင်ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ စက်ဘီးနှင့် mopeds သာလျှင်ထို့နောက်အသေးစားငွေသားဂိုဏ်းဂဏကိုက်ညီတဲ့လိုရှိနေဆဲခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးကတော့, သငျသညျလညျးအပျောက်ကွယ်သွားဖို့ mopeds နှင့်စက်ဘီးကလိုချင်သည်။ ကမူးယစ်ဆေးဝါးများအချို့ဆေးဝါးများနှင့်အသုံးပြုမှုခိုးယူဖို့ဖြစ်ပျက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ဖြစ်ကောင်းဆိုဆေးဆိုင်ချထားသငျ့သလော အဆက်မပြတ်ငွေသားကိုဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်လုယက်မှုအပြစ်တင်ဖို့အမှန်တကယ်စင်ကြယ်သောကလေးဆန်သောမှနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။
100-krona နှင့်လျော့နည်းပိုက်ဆံကျန်ကြွင်းသောအခါ, ကအားလုံးကိုမှာငွေသားအဘို့နိယာမပြေး၌တည်ရှိ၏။ သို့မဟုတ် 20 ကိုအပိုင်းပိုင်း - ထိုအခါ 50 ခုနှစ်တွင် 3000 kronor တောင်း (သင်နေတုန်းပဲရှိပါတယ်ပိုက်ဆံထုတ်ယူနိုင်ပါသည်လျှင်) ဘဏ်တစ်ခုထွက်ပေါက်မှာစမ်းပါ။ သငျသညျထရေတွက်စက်အဖြစ်သို့မဟုတ်လက်စွဲစာအုပ်ရေတွက်ပေါ် 150 မှတ်စုဘဏ်အပေါ်ဆက်လက်ဖြစ်ပျက်သင့်တယ်အဆိုးဆုံးကိန်းဂဏန်းမှာငွေသား၏အလွန်ထူသောအစုလိုက်စီမံခန့်ခွဲရန်ဘဏ်ဝန်ထမ်းများထင်ပါသလား? ခဲ 75 ငါးဆယ်ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြစ်စေ။ ငွေစက္ကူတွေ၏ဂိုဏ်းဂဏ၏ရုပ်သိမ်းရေးအပေါ်အခြေခံပြီး ATM စက်။ တဦးတည်းသီအိုရီအ 50 နှင့် 20 ထပ်အားသွင်းဖို့ခွင့်ပြုနိုင်လျှင်စက်တွေအတွက်ငွေသား၏အထူအစုလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဝန်စက်များတွင်ပိုက်ဆံ၏စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအားလျော့မယ်လို့နှင့်ငွေများ၏အသံအတိုးအကျယ်ငွေသားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘို့အများကြီးပိုကြီးတဲ့နည်းစီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာအချို့ရပ်ကွက်အတွက်မှတ်စုမပါဘဲသာဒင်္ဂါးပြားအထိ 50 kroner တန်ဖိုးကိုရှိသည်ဖို့အဆိုပြုချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကျယ်ပြန့် margin ကရောက်ရှိခဲ့သည်ခံရဖို့ငွေများအတွက်နာကျင်မှုတံခါးခုံကို ကျော်လွန်. ကန့်သတ်လိမ့်မယ်။ အဘယ်အရာကိုဘဏ်ကမှာထုတ်ယူဖို့ဖြစ်ပျက်များနှင့်စက်တော့အရောင်းမလဲ ဒါဟာထို့နောက်ငွေသားစက်အတွက်ဒင်္ဂါးပြားကိုထုတ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းအတော်လေးမဖြစ်နိုင်။ အကြွေစေ့မိတ်ဆက်ဒါမှမဟုတ် ATM စက်များဒင်္ဂါးပြားအဟောင်း slot ကစက်ဒါမှမဟုတ်ဘာနဲ့တူလမ်းပေါ်မှာ? ခဲ။ အဆိုပါပြဿနာကိုသင်အကြံပြုချက်ဒီလိုမျိုးမှာစဉ်းစားသို့မဟုတ်အစားသငျသညျကိုသာမျက်စိ၏ဖယ်ရှားရေးငွေရှိသည်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။
ဒါဟာသင်ပူးတှဲပြဿနာများနှင့်အတူအစားသဘောတူညီချက်ထဲမှာပိုက်ဆံထုတ်ယူသင့်ကြောင်းကောင်းစွာဆိုလိုသညျ။ အဆိုပါစျေးဆိုင်ပိုက်ဆံထို့နောက်သင်တန်းကိုလည်းသိသိသာသာပိုကြီးတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသံအတိုးအကျယ် may ပေမယ့်သေးငယ်တဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုး။ ငွေသားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသိသိသာသာပိုပြီးစျေးကြီးနှင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့ပိုပြီးခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ ယခုပင်, စီးပွားရေးအတွက်ငွေသားများဆုတ်ခွာလက်လီများအတွက်အရှုံး။ ဒါဟာဝေးသိသောသူအပေါင်းတို့ကနေဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါဒင်္ဂါးပြားငွေစက္ကူတွေထက်ပိုကောင်းနှင့်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ သို့သော်ထို့နောက်အားလုံးဂိုဏ်းဂဏ၏ဒင်္ဂါးပြားရှိပါလိမ့်မယ်။ တောင်မှအမြင့်ဆုံး။
ဒါဟာအလွယ်တကူဤအခြေအနေ၌, ထို့ကွောငျ့, ATM စက်များနှင့်အတူထွက်လည်းကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ ထို့အပြင်တကယ်တော့ကိုလည်းသူတို့သုံးစွဲဖို့ခရက်ဒစ်ကဒ်လိုအပ်နေသောကြောင့်အလွန်အနုတ်လက္ခဏာတစ်ခုခု uttagsutomaterna နှင့်ဘဏ်ထဲမှာလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ကြံ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်းလျော့နည်းခြင်းနှင့်ငွေသားအသုံးပြုချင်မှလျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ တချို့ကဘဏ်များသာပိတ်လိုက်လုံခြုံလုံခြုံရေးစနစ်ကနေတဆင့်တန်ပြန်ကျော် 500-kronor ထွက်ပေးပါ။ အဲဒီဘဏ်တွေပြန်သေးငယ်မှတ်စုများကိုသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ဖို့နုံဖြစ်ပါတယ်။
၏သင်တန်းကပင်တစ်ကြိမ်အချို့သောအစားအစာဝယ်ယူခြင်းဖြင့်သာ 20 မှတ်စုများနဲ့ဒင်္ဂါးပြားတွေနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်စျေးပေါသို့မဟုတ်အသုံးပြုသောအဝတ်အစားဝယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သောပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ကျော်လွှားပြဿနာတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လသေးငယ်တဲ့ဥပဒေကြမ်းများရာပေါင်းများစွာကိုကိုင်ရဖို့ကိုဘယ်လိုပေါ်ပေါက်။ ဘဏ်များသည်ဤသည်မယ်လို့ထင်မထားပါနဲ့။ ကျွန်မစဉ်းစားတစ်ဦးအစွန်းရောက်အရေးပေါ်ဖြေရှင်းချက်စျေးပေါဝယ်ဖို့အကြွေစေ့လိပ် "မဝယ်" ရန်ဖြစ်ပါသည်
မရှိမဖြစ်၏မျိုးကွဲ။ ဒင်္ဂါးပြားထိုကဲ့သို့သောကစားကွင်းအဖြစ်အမြောက်အမြားအတွက်ဖြစ်ကြသည်။ ဘယ်လိုဒင်္ဂါးပြားရဖို့အကြွေစေ့ကစားရုံများနှင့်ကုန်သည်များကြသနည်း ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ငါမသိပေမယ့်နောက်ထပ်အပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မည်။
ဒါဟာဘဏ်များကိုင်တွယ်ကျန်ရှိငွေသားနှင့်ဖြစ်ကောင်းလည်းစက်တွေအတွက်ပိုက်ဆံစုဆောင်းရန်ဖြစ်ကောင်းမောင့်ငွေသား၏နှစ်ခုအကြီးဆုံးဂိုဏ်းဂဏကိုပယ်ရှားဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ ငွေကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုခငျြသောသူတို့အဘို့ယခုတန်ဖယ်ရှားရေးမှတတ်နိုင်သမျှခုခံလုပ်ဖို့ပြီးတော့ရောက်လာ၏။ ဒါကြောင့်ပြုမိသည်ကိုတပြိုင်နက်နီးပါးလုံးဝငွေသားအဘို့မောင်းနှင်နေသည်။
အဆိုပါခြားနားချက်ပြည်နယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ, ငွေကြေးကုမ္ပဏီများနှင့်စျေးဆိုင်တဖြည်းဖြည်းရွေးချယ်စရာမရှိဘဲလုံးဝ cashless လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတင်းအကျပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းအကြွေးကဒ်များကို (နှင့်အခြား Non-ငွေပစ္စည်းများ) သို့မဟုတ်ငွေသားများအကြားတစ်ဦးရွေးချယ်မှုတစ်ခုပိုင်ခွင့်ရှိသည်သငျ့သညျအဖြစ်ရေရှည်မှာအကြောင်းဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအချို့သောအတိုင်းအတာအထိရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရိုးရှင်းစွာဖှံ့ဖွိုးတိုးရန်သေချာသောခုခံသောကြောင့်, တစ်ခုဖြစ်သည်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကားအနှစ်တဆင့်ပိုမိုမြန်ဆန်, sleeker, ဘေးကင်းပိုအဆင်ပြေပြေနဲ့စျေးသက်သက်သာသာဖြစ်ရပြီ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလူတွေကအလိုအလျှောက်ပိုပွီးကားများဝယ်ယူနေသောကြောင့်။ ဒါပေမဲ့အကြွေးကဒ်များကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌, တကအတင်းအကျပ်လက်ခံမှုနှင့်လူများကသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ရဖို့တဖြည်းဖြည်းချင်းအကျပ်ကိုင်နှင့်အတူ coaxing အကြောင်းကိုအကြီးအကျယ်ပါပဲ။
သဘာဝကသမိုင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတခုရဲ့ဥပမာအကျိုးအတွက်သို့မဟုတ်သိချင်စိတ်များ၏လူသားထုကိုမူရင်းကန့်သတ်ခြင်းမှဝေးလှုံ့ဆျောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာfödosöketများအတွက်အာကာသခရီးသွားအသစ်အမဲလိုက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံရှာအံ့သောငှါအဘယ်သူကျောက်ခေတ်ကလူကနေအထိနိုင်ပါတယ်။ စစ်ပွဲနှင့်လက်နက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှတစ်ဆင့်သဘာဝ, ဆိုသော်ငြားမြင့်မားအနုတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်kontantlösheten၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကသဘာဝပါပဲ။ ဒါဟာသဘာဝနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်
နှင့်အပျက်သဘော။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်အာဏာလောဘနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအားဖြင့်မောင်းနှင်နေတဲ့ကောက်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ cashless အငြင်းအခုံအတွက်အခြေခံအကျဆုံးအမှားkontantlöshetသဘာဝဖှံ့ဖွိုးတိုးတအဖြစ်ပုံဖော်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကြောင်းkontantlöshetထင်သူမည်သူမဆိုဖြစ်ကောင်းနှစ်ပေါင်းရာချီမှားအတွက်ပွင့်လန်းလိမ့်မည်ဟုသဘာဝဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်ပါတယ်။ ဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်ရေရှည်မှာဆက်လက်ရှင်သန်သင့်တယ်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်စနစ်များမဟုတ်ဘဲတစ်ဦး mutated နှင့် atrophied တိရိစ္ဆာန်များမှနှိုငျးယှဉျနိုငျသညျ။
သင်, လမ်းလျှောက်သံသရာ, အလုပ်မှကားဖြင့်ဘတ်စ်ကားစီးသို့မဟုတ်သွားကြဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကားကိုအကြမ်းအားဖြင့်တရာနှစ်အတွင်းအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်ခဲ့ပေမယ့်တစ်ကားကိုမပါဘဲဖြစ်လိုသူအများအပြားရှိနေဆဲရှိပါတယ်။ အလားတူဒါအပေါ်တယ်လီဖုန်း, ရုပ်မြင်သံကြား, ရေဒီယို, အင်တာနက်, ကွန်ပျူတာနှင့်အဘို့တတ်၏။ ဤအလုံးဝလိုအပ်သောနှင့်သဘာဖှံ့ဖွိုးတိုးကြောင့်တထို့နောက်အလင်းမီးသီးများနှင့်လျှပ်စစ်မီးဖိုများအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ပင်ဤကိစ္စတွင်အတွက်, လိုခငျြသောသူတို့အဘို့တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ဖယောင်းတိုင်နှင့်ရေနံဆီမီးဖိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေတုန်းပဲ။ ဒါဟာမောင်းထုတ်ရန်လူတိုင်းကိုအတင်းဖို့စိတ်ပျက်ဖွယ်နှင့်ဘက်မှာအကျင့်ပျက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့အကြွေးကဒ်များကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးမြင့်တက်ကိုင်တွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုမျှkontantlöshetကျန်းမာနှင့်သဘာနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကြောင်းဖော်ပြသည်။
Vecka 10, tisdag9mars 2021 kl. 07:21